Pakistan: Karachi eo ambanin’ny fanafihana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Mey 2018 3:42 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Nederlands, Italiano, македонски, Português, 简体中文, 繁體中文, বাংলা, English
Tamin'ny 5 Febroary 2010, fipoahana baomba vy very ny ainy roa no namely ny tanàna metropolitana Karachi ka namoizina ain'olona 15 sy naharatrana 70. Nikendry indrindra ireo mpisaona Shiita nandeha namonjy ny Muharram ny fanafihana voalohany. Nitranga tao ivelan'ny sampana vonjimaika tao amin'ny hôpitaly Jinnah, izay namindràna ny naratra ny fipoahana faharoa. Niseho 40 andro taorian'ny daroka baomba tao Ashura izay nahafaty olona 40 mahery ny fanafihana. Indrisy, nanana tantara momba ny herisetra eo amin'ny foko sy fivavahana i Karachi.
Tao amin'ny bilaogiko manokana nampahatsiahy sy niampanga ny fiverenan'ny herisetra ao Karachi aho:
Kalsoom Lakhani ao amin'ny CHUP – Changing Up Pakistan nanameloka ireo andiam-panafihana ny Miozolomana Shiita, ary nanontany ny toetran'ny fampanjakana ny lalàna sy ny filaminana ao amin'ny firenena:
Tamin'ny lahatsoratra iray feno teo aloha tao amin'ny bilaogy, nanome fanazavana momba ny tantaran'ny herisetra ao Karachi i Kalsoom. Araka ny voalazan'i Dawn, olona 34 mahery no namoy ny ainy tamin'ny herisetra ara-poko tao amin'ny faritra samihafa tao an-tanàna tamin'ny volana aprily tamin'ny herintaona. Natahotra ny vahoaka amin'ny ankapobeny noho ny herisetra miely patrana sy ny tsy fahafahan'ny manam-pahefana mifehy ny zava-misy.
Mangataka i Adil Najam ao amin'ny All Things Pakistan fa tokony apetraka ho faritra tsy misy fitaovam-piadiana i Karachi:
Raha mandinika ny korontana vao haingana tany Karachi, mila mandray andraikitra avy hatrany ny governemanta mba hamaranana ny herisetra. Na izany aza, araka ny voalazan'ny vaovao, sahirana mametraka ady anatiny ny manampahefana fa tsy mba mamaha ireo olana lehibe.